Who were Bengali, so called Rohingya?: သတိ
"သတိ...... မြန်မာပြည်သားများ အားနာလျှင် အားပါသွားလိမ့်မည်"
၁။ ငါတို့ မြန်မာပြည်သည် ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကတဲက တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ နေထိုင်လာခဲ့ရာတွင် ထို ဘင်္ဂလီများ မပါပါ။
၂။ မြန်မာပြည်မထဲရောက်နေသော ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံကုလားများအားလုံးအား အကုန် လိုက်လံစီစစ်၍ တရားမ၀င် အကြံအဖန်လုပ်သူ ကြံရာပါများပါမကျန် ဖမ်းစီးနိုင်ရန် တာဝန်သိပြည်သူအပေါင်းမှလဲ တတတ်တအား ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြပါ။
၃။ရိုဟင်ဂျာများကိုမြန်မာပြည်တွင်းရောက်အောင် ခေါ်ဆောင်ပေးနေသော ငွေမျက်နှာတခုတည်း သာကြည့်၍အမျိုးဖျက်မည့် လ.၀.က တွေကို ရှာဖွေစုံစမ်းဖေါ်ထုတ်ပေးကြပါ။
၄။ ငါတို့ တိုင်းပြည် ငါတို့ နယ်မြေဒေသများအား အကြံအစည် ကြီးကြီးနှင့် ထိုးနှက်တိုက်ခိုက် နယ်မြေချဲ့ထွင်လာခြင်းအား ငါတို့မြန်မာပြည်သူလူထု တရပ်လုံး အမျိုးသားရေးအသိစိတ်ဓါတ်နိုးကြားစွာဖြင့် ခုခံကာကွယ် တွန်းလှန်ကြမည်။
၅။ ငါတို့နိုင်ငံကို ပါကစ္စတန်လို ဘ၀မျိုး ဘယ်တော့မှ အဖြစ်မခံနိုင်။
၆။ ရိုဟင်ဂျာ များ မြန်မာပြည်တွင်း ထိုးဖေါက်ဝင်ရောက်လာရာတွင် အဓိက အသုံးပြုသော အချက်များမှာ............................
(a) မီဒီယာကို အသုံးချ ၀ါဒဖြန့်ခြင်း
(b) ငွေကြေး ဖြင့် သိမ်းသွင်းစည်းရုံးခြင်း
( c ) သာသနာပြု ဘမ်းပြ၍ ထိုးဖေါက် စိမ့်ဝင်ခြင်း
(d) တရားမ၀င်နည်းလမ်း များဖြင့် မြန်မာပြည်တနံတလျားဝင်ရောက် အခြေချ၍ ခြေကုတ်ရယူခြင်း
(e) မြန်မာနိုင်ငံအား လူမျိုးဝါးမျိုးရေး စီမံကိန်းဖြင့် လူအင်းအားချဲ့ထွင်ခြင်း
(f) လက်နက်ဆွဲကိုင် တိုက်ခိုက်ခြင်း ( နောက်ဆုံးနည်းလမ်း)
အစိုးရပိုင်းမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ငွေမျက်နှာ ၁ခုပဲ မကြည့်ကြပါနဲ့လို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ အစိုးရပိုင်းမှ မကူညီပဲ ဘယ်လိုမှ အရာမရောက်နိုင်ပါ။ တိုင်းပြည်ကို ချစ်လှပါသည် ဆိုသော လက်ရှိအာဏာရ ကြံ့ဖွံ့ ပါတီကြီးကရော ဘာတွေလုပ်နေကြပါသလဲ..? ကိုယ့်ဆွေးမျိုးလေးလောက်ပဲကွက်ပြီး ချစ်မနေကြပါနဲ့.. ပြည်သူ့ မျက်နှာလေးလဲကြည့်ကြပါအုံးဗျာ.... မြန်မာအမျိုးသမီးဟုခံယူထားသူ အမျိုးသမီးထုကြီးအားလည်း ငွေမျက်နှာ ၁ ခုတည်း မကြည့်ကြရန် နိုးဆော်အပ်ပါသည်။ အချင်းချင်း အသိပညာ ဗဟုသုတလက်ဆင့်ကမ်း ဖြန့်ဝေပေးကြပါ ။
မှတ်ချက်။ " မြေမျို၍ လူမျိုးမပြုတ်နိုင် လူလူချင်းမျို၍ ဖျက်ဆီးမှသာ လူမျိုးရော တိုင်းပြည်ပါ ပျောက်ကြရပါလိမ့်မည်။"
Posted by Anti Rohingya (Bengali Muslim) - Anti Terrorist at 11:09 AM
မလေးရှားရှိ ခင်မောင်ဝင်း တင်မောင်ဆွေ စင်္ကာပူမှ မောင်မောင်ခင် ကဲ့သို့သော ပြည်တွင်းပေါက် ခေါ်တောများ ငွေအား စိတ်အားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာလှုပ်ရှားမှု့ကိုထောက်ခံပြီး တဘက်မှသံရုံး ပြည်တွင်းမှစစ်ဗိုလ်များနဲ့လည်းတည့်အောင် ပေါင်းတတ်သော မြေခွေးများကိုလည်း နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ဆွဲသိမ်းပစ်ပါ